mushaTHE WORLDAFRICA226 Burkina FasoAbout Burkina Faso Railway
24 / 02 / 2020 226 Burkina Faso, AFRICA, THE WORLD, Railway, GENERAL, musoro wenyaya
About burkina faso njanji
Burkina Faso inyika isina nyika inowanikwa kumadokero kwedunhu reAfrica. Mali, Niger, Benin, Togo, Ghana neIvory Coast dzinogadzira vavakidzani vemuganhu (wachi kubva kuchamhembe). Nyika, yaive koloni yeFrance munguva yakapfuura, yakawana rusununguko muna 1960 pasi pezita reUpper Volta. Nekuda kwekusagadzikana kwezvematongerwo enyika munguva yerusununguko, ma coups akaitika, musi wa 4 Nyamavhuvhu 1983 achitungamirwa naThomas Sankara, zita renyika rakashandurwa kuita Burkina Faso semhedzisiro yezve shanduko. Guta guru renyika ndiOuagadougou.
Kune njanji imwechete inonzi Abidjan - Niger Line muBurkina Faso, iyo inobatanidza guta guru uye rezvekutengeserana Abidjan neguta guru reOuagadougou. Maitiro aya, ayo akatambudzika nekuda kweBurkina Faso, inova nyika inokonzerwa nekushomeka kwehondo dzezvematunhu muIvory Coast, inotora basa rakakura mukufambisa yezvigadzirwa zvemunyika mugungwa. Parizvino, zvese zviri zviviri kutakura uye kutakura vanhu kunoitwa pamutsetse uyu. Munguva yeSankara, kunyangwe hazvo zvaidikanwa kuitwa kuti vawedzere kureba kwetambo kuguta reKanja kuitira kuti vatakure hupfumi hwepasi inowanikwa pano, zviitwa izvi zvakamiswa nekupera kweSankara nguva.
Burkina Faso Ndege
33 chete enhandare nendege makumi matatu neshanu dziripfuura nomunyika ine asphalt runways. Ouagadougou Airport airport, iri muguta guru reOuagadougou, rinoitikowo nhandare yakakura kwazvo munyika, uye nendege ku Bobo-Dioulasso, ndiyo nhandare yendege mbiri dzinoenderana nemaitiro epasi rese.
Nyika yacho ine kambani imwechete yenyika yekufambisa ndege inonzi Air Burkina, inotungamirwa muguta guru, Ouagadougou. Mushure mekunge kambani iyi yavakwa munaKurume 17, 1967 pasi pezita reSky Volta, yakatanga kuita ndege dzakatakurwa nemakambani anobva kuFrance, uye zita rekambani rakaburitswa nenyika zvichiteerana neshanduko yeSankara munyika. Semumwe wevatori vechikamu veBurkina Faso, chikamu chekambani yeAir Burkina chakavanzika muna 2002, nekuda kwekushomeka kwemari yeAir Afrique, iyo yaishandiswa nenyika zhinji dzeAfrica pamwe neFrance.
Kuwedzera kune ndege dzekumba, Air Burkina nendege dzinoronga kudzorera ndege nomwe nyika dzakasiyana. Nyika dzinofambiswa nendege dzepasi rose ndedze: Benin, Ivory Coast, Ghana, Mali, Niger, Senegal uye Togo.
Kune makiromita gumi nemaviri nemakumi mashanu emakona emunyika, uye 12.506 km yadzo yakavezwa. Muongororo yakaitwa neWorld Bank muna2.001, Burkina Faso network yekufambisa yakaongororwa seyakanaka kunyanya nekubatana kwayo nenyika dzedunhu, Mali, Ivory Coast, GAna, Togo neNiger.
Mitemo uye Mitemo pamusoro peBiberalization ye Railway Transport ile
DTO Antalya Bazi Mutungamiri Erol Spoke paKumhanya Yekukurumidza Chitima uye Chiteshi Chekutakura zvinhu
EIA musangano uchaitwa paAnalalya-Kayseri Railway Project
Kunyora Mutemo musi Railway Transport mazvake kweTurkey
Mutungamiri Cankesen Anotaura NezveGwara Rekudzikinura Mutemo (Vhidhiyo)
Nezve Baku-Tbilisi-Kars Railway Line Construction
Erzincan-Trabzon mubvunzo wesitima pamusoro pejekiti
AK Party VaElvan Karaman vakataura pamusoro pekutsvaga kwezvitima
Vashumiri vekutakura vakataurirana BTK Railway Project
Italian Salini Inokunda Houston Dallas Kurumidza Chitima Tender
Istanbul Kadhi Padhi Inovhara muTutakura